Layaab: Is rasaaseyntii xalay ka dhacday Gaalkacyo Booliska oo gacanta ku dhigay khamri fara-badan iyo gaarigii waday. | Arrimaha Bulshada
Home News Layaab: Is rasaaseyntii xalay ka dhacday Gaalkacyo Booliska oo gacanta ku dhigay khamri fara-badan iyo gaarigii waday.
Layaab: Is rasaaseyntii xalay ka dhacday Gaalkacyo Booliska oo gacanta ku dhigay khamri fara-badan iyo gaarigii waday.
Saturday, February 05, 2022 News
Bulsha:- Ciidammada Booliska Puntland oo howlgallo ka wada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa gacanta ku dhigay khamri fara-badan iyo gaarigii waday.
War kasoo baxay Taliska Qeybta Booliska gobalka Mudug ayaa lagu sheegay in khamrida ciidammadu gacanta ku dhigeen ay gaarayso ilaa 20 kartoon, taas oo si dhuumaaleysi ah looga ganacsanayay.
Sidoo kale, Taliska Booliska gobalka Mudug ayaa sheegay in Ciidammada iyo kooxihii ka ganacsanayay khamrida ay dhexmartay Is-rasaaseyn, Mana jiro wax khasaare ah oo ka dhashay.
Booliska Puntland ayaa magaalooyinka waa weyn ee mandiqada ka wada howlgallo balaaran oo ka dhan ah ka ganacsiga maandooriyaha, sida khamrida iyo xashiiska, oo deegaanada Puntland kasoo gala xadka Puntland ay la wadaagto Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.